VaMugabe Vanosvika kuBulawayo Pamberi peMusangano weBato Ravo
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe.
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakasvika muBulawayo nemusi weChishanu uye vari kutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPhelandaba Stadium, kuGwanda kuMatabeleland South Province nemusi weMugovera.
Asi vanongorori nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti misangano iyi haina zvizhinji zvainobetsera vanhu kunze kwekupa VaMugabe nemudzimai wavo mukana weku tsoropodza vanhu, zvikuru sei avo vanonzi vari kurwira kuzotora chinzvimbo chaVaMugabe kana vazosiya chigaro.
VaFarai Maguwu, avo vanotungamira sangano reCenter For Natural Resource Governance, vanoti misangano iyi haisi yekugadzirisa zvinhu.
“Havasi kugadzirisa matambudziko chaiwo ari kuMatabeleland. Dambudziko riripo nderekuti nyaya yeGukurahundi inofanirwa kunyatsokurukurwa uye isvitswe kumapeto asi VaMugabe vari kunzvenga nzvenga panyaya iyi.”
VaMaguwu vanopamidzirazve vachiti, “VaMugabe hapana chavamboti vaita zvekubatsira vanhu vekuMatabeleland. Migwagwa inongogadzirwa panoenda VaMugabe ikoko; vanhu vanotodyavo zvakanaka musi uyoyo. Saka idambudziko hombe riri kuMatabeleland risingapedzwe nemusangano waVaMugabe asi rinoda chirongwa chekusimudzira nyika.”
Vanoti panodiwa zvirongwa zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kusanganisa zvezvikoro, mabasa, uye kumutsidzira makambani akavahara nearikutatarika mudunhu iri.
VaMugabe vari kutarisirwa kutanga vaita musangano nevakuru vakuru veZanu-PF Youth League mudunhu iri vasati vataura kuruzhinji rwevanhu.
Mutungamiri wenyika ari kutenderera mumatunhu ose enyika achiita misangano akanangana nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna 2018.
Mupunga Wotarisirwa Kuwedzerwa Mutengo Zvakanyanya Mamwe Mabhizimisi Achivhara neNyaya yeMutero